Fambolen-kazo: adidy lehibe nataon’ny minisiteran’ny Vola | NewsMada
Fambolen-kazo: adidy lehibe nataon’ny minisiteran’ny Vola
Notontosaina ny faran’ny herinandro teo teny Andranovelona, lalam-pirenena faha-4, ny fifampiarahabana, noho izao taona vaovao izao, teo amin’ny fianakaviamben’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola, notarihin’ny minisitra Andriambololona Vonintsalama sy ny vadiny. Toy ny fanaon’ny minisitera, amin’ny alalan’ny fambolen-kazo no nanamarihana ny fiandohan’ny taona.
Hetsika fanaon’ireo sampandraharaha rehetra ao amin’ny minisitera izany sy adidy lehibe ho an’ny tanindrazana. Nahatratra 3000 ireo zana-kazo novolena amina velaran-tany 2 ha. Anisan’ny novolena tamin’izany ny Oliva, ny Ravintsara, ny Kininina. Iankinan’ny toekarena lehibe izany voly hazo izany, ary ireo karazan-kazo ireo, nosafidina manokana hiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro.
Nandritra ny kabary nataony, niarahaba sy nisaotra ny mpiara-miasa rehetra Rtoa minisitra tamin’ny vokatra tsara nandritra izay herintaona sy tapany nitantanany ny ministera izay. “Miankina betsaka amin’ny Vola sy ny tetibola io ny fampandehan-draharaham-panjakana io. Adidy sy andraikitra lehibe ny fikirakirana ny vola ary voatana tsara ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mitantana momba ny fikirakirana ny volam-panjakana”, hoy izy. Marihina fa voasolo tena avokoa ireo foibem-pitondrana mandrafitra ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola.